Myths of Tampon – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Myths of Tampon
မိနျးကလေးခငျြးမို့လကျတို့ပွောရဦးမယျ။ ( အပိုငျး၂)
Tampon နှငျ့ အယူအဆမှားမြား
Tampon ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးလစဉျသုံး မိနျးမကိုယျထဲထညျ့တဲ့ပစ်စညျးလေးအကွောငျးကိုရှဆေ့ောငျးပါးတုနျးကဖျောပွပွီးဖွဈတာကွောငျ့ ဒီတဈခါမှာတော့သူနဲ့ပတျသကျတဲ့ ယုံတမျးစကားတှေ၊ အယူအဆမှားတှအေကွောငျးပွောပွခငျြပါတယျ။
Tampon ဟာ အသကျကွီးမှသုံးလို့ရတာမဟုတျဘူးလား?
မဟုတျပါဘူး။ ရာသီစပျေါတဲ့အပြိုပေါကျလေးတှကေစပွီးသုံးလို့ရပါတယျ။သုံးစှဲပုံ၊ လဲလှယျပုံတို့ကို သခြောသငျထားပေးဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
Tampon ဟာ အပြိုရညျပကျြစတေယျမဟုတျဘူးလား?
အပြိုအမှေးပါးလို့ချေါတဲ့ Hymen ဟာ Tampon ထညျ့လိုကျရငျပွဲသှားမှာပေါ့??မဟုတျပါဘူး။ အပြိုရညျပကျြတာဟာ အပြိုအမှေးပါးပေါကျသှားတာကွောငျ့လို့သတျမှတျကွပါတယျ။
Tampon ကိုမိနျးမကိုယျထဲထညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အပြိုအမှေးပါးဆီ ထိမိတာမြိုးတော့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပြိုအမှေးပါးကိုဆှဲလိုကျသလိုမြိုးပဲဖွဈစတောမို့
Tampon ကွီးထညျ့လိုကျတော့ အပွငျကပိုးတှဝေငျကုနျမှာပေါ့။
မှနျသငျ့သလောကျတော့မှနျပါတယျ။ သခြောဆေးကွောပွီးထညျ့မယျ။စနဈတကထြညျ့မယျဆို ပိုးဝငျနိုငျခွရောခိုငျနှုနျးအလှနျနညျးပါတယျ။၄နာရီ တဈခါလဲလယျဖို့ကိုတော့မမေ့ာနဲ့။
Tampon ထညျ့ထားခြိနျ ဆီးသှားလို့အဆငျပွပေါ့မလား။
Tampon က နရောရှပွေီ့း ဗိုကျထဲဝငျသှားတာမြိုးရော?
မရှိနိုငျပါဘူး။ မိနျးမကိုယျကထညျ့လိုကျတဲ့ Tampon ဟာ မှေးလမျးကွောငျးထဲမှာပဲ ရှိနပွေီး အပျေါမှာလဲ သားအိမျခေါငျးအဝဟာ ရာသီသှေးဆငျးဖို့ အပေါကျအသေးလေးသာပါတာမို့ ဗိုကျထဲဝငျမသှားနိုငျပါဘူး။ ဒီလောကျဆို Tampon အကွောငျး ကောငျးကောငျးသိပွီပေါ့ ယောငျးယောငျးတို့ရေ။
မိန်းကလေးချင်းမို့လက်တို့ပြောရဦးမယ်။ ( အပိုင်း၂)
Tampon နှင့် အယူအဆမှားများ
Tampon ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလစဉ်သုံး မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်တဲ့ပစ္စည်းလေးအကြောင်းကိုရှေ့ဆောင်းပါးတုန်းကဖော်ပြပြီးဖြစ်တာကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေ၊ အယူအဆမှားတွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
Tampon ဟာ အသက်ကြီးမှသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလား?
မဟုတ်ပါဘူး။ ရာသီစပေါ်တဲ့အပျိုပေါက်လေးတွေကစပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။သုံးစွဲပုံ၊ လဲလှယ်ပုံတို့ကို သေချာသင်ထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Tampon ဟာ အပျိုရည်ပျက်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလား?
အပျိုအမှေးပါးလို့ခေါ်တဲ့ Hymen ဟာ Tampon ထည့်လိုက်ရင်ပြဲသွားမှာပေါ့??မဟုတ်ပါဘူး။ အပျိုရည်ပျက်တာဟာ အပျိုအမှေးပါးပေါက်သွားတာကြောင့်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Tampon ကိုမိန်းမကိုယ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အပျိုအမှေးပါးဆီ ထိမိတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပျိုအမှေးပါးကိုဆွဲလိုက်သလိုမျိုးပဲဖြစ်စေတာမို့
Tampon ကြီးထည့်လိုက်တော့ အပြင်ကပိုးတွေဝင်ကုန်မှာပေါ့။
မှန်သင့်သလောက်တော့မှန်ပါတယ်။ သေချာဆေးကြောပြီးထည့်မယ်။စနစ်တကျထည့်မယ်ဆို ပိုးဝင်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းအလွန်နည်းပါတယ်။၄နာရီ တစ်ခါလဲလယ်ဖို့ကိုတော့မမေ့ာနဲ့။
Tampon ထည့်ထားချိန် ဆီးသွားလို့အဆင်ပြေပါ့မလား။
Tampon က နေရာရွေ့ပြီး ဗိုက်ထဲဝင်သွားတာမျိုးရော?
မရှိနိုင်ပါဘူး။ မိန်းမကိုယ်ကထည့်လိုက်တဲ့ Tampon ဟာ မွေးလမ်းကြောင်းထဲမှာပဲ ရှိနေပြီး အပေါ်မှာလဲ သားအိမ်ခေါင်းအဝဟာ ရာသီသွေးဆင်းဖို့ အပေါက်အသေးလေးသာပါတာမို့ ဗိုက်ထဲဝင်မသွားနိုင်ပါဘူး။ ဒီလောက်ဆို Tampon အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပြီပေါ့ ယောင်းယောင်းတို့ရေ။